သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: July 2009
Thစ်Yွက်ေtွကြေKွ Kျ
Hlှ Pa tဲ့ေnွ ည Mှာ
ေMွှးPျံ့tဲ့ pန်းကေlး tိတ်တkိုး pွင့်thွားtယ်
Nyဉ့်Ngှက်ေlး tစ်ေkာင် kပ်tိုးtိုးေtးsိုtယ်
a cျစ် Yယ်……..
kိုယ် mင်းkို lွမ်း lို့ ngိုtယ်…
ကူးကူးတို့ ကျားတို့ ဖြိုးသက်အောင်တို့ နားမလည်အောင် မလေးက အခုလိုတမင်တကာရေးတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ ……………
wow… modern art letter haha :P
Comment by westcoast22 — July 30, 2009 @ 1:00 am |Edit This
ကဗျာလေးက ချိုလိုက်တာ..အရမ်းကြိုက်တယ်။ အစ်မရဲ့ခုတလောပို့တွေဖတ်ကြည့်ပြီး အစ်မပျော်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်..။
Comment by Evergreen Phyo — July 30, 2009 @ 1:19 am |Edit This
ပထမအကြောင်းက ..“သစ်ရွက်တွေကကြွေကျ” ..“ကျ”ဆိုတာကျန်ခဲ့တယ်..။
Comment by Evergreen Phyo — July 30, 2009 @ 1:21 am |Edit This
မွှေးပြန့်ပန်းကလေး တိတ်တခိုး ပွင့်သွားတယ်
ညဉ့်နက်လေးတစ်ခေါက် ခပ်တိုးတိုး တေးဆိုတယ်
ကိုမင်းကို လွမ်းလို့ ငိုတယ်
ဟီ ဟီ ဟုတ်လားတော့ မသိဘူးနော် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖတ်ကြည့်လိုက်တာပဲ
Comment by လူရိုင်းလေး — July 30, 2009 @ 1:35 am |Edit This
မွှေးပျံ့တဲ့ ပန်းကလေး တိတ်တခိုးပွင့်သွားတယ်။
ကိုယ်မင်းကို လွမ်းလို့ငိုတယ် …
အမလေး … မလေးရေ …
Comment by မေဓာဝီ — July 30, 2009 @ 1:49 am |Edit This
မွေးပျံ့တဲ့ ပန်းကလေးတိတ်တခိုး ပွင့်သွားတယ်
ကိုယ်မင်းကို လွမ်းလို့ ငိုတယ်
Comment by mm — July 30, 2009 @ 1:52 am |Edit This
နွေညကလည်းလှနေတယ် ငိုသံတွေတိတ် သာသာအိပ်ပါကွယ်
Comment by ပန်ဒိုရာ — July 30, 2009 @ 3:06 am |Edit This
မလေး……… အရမ်းလွမ်းတယ်သိရဲ့လား.. မတွေ့တာကြာပြီ
Comment by ပန်ဒိုရာ — July 30, 2009 @ 3:07 am |Edit This
လာပြီး ဘာသာပြန်မလို့ အပေါ်က ကျွမ်းကျင်သူဆရာများက ပြန်ပြီးသွားဖြစ်နေပြီ…
Comment by ခင်မင်းဇော် — July 30, 2009 @ 3:12 am |Edit This
westcoast22 … ကဗျာမခံစားတတ်သူကို ပိုဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေပြီလားမသိ :P
မမေ၊ Evergreen Phyo၊ mm နဲ့ လူရိုင်းလေး… တော်ကြပါပေသည်.. တော်ကြပါပေသည်။ မလေးမှာရှိသော သည်ထက်ပိုခက်ခဲ နက်နဲသောပညာတွေတွေ ထုတ်သုံးတော့မှ ထင်၏။ :D။ ကိုဖြိုးထင်တာမှန်တယ်။ နေရင်းထိုင်ရင်း အူမြူးနေတာ။ heat wave ကြောင့်လားမသိပါဘူး။
မပန်... တကယ်လွမ်းလို့လားကွယ်… မပန်ဆီအမြဲရောက်ပါတယ်။ မယုံရင်ခြေရာသာရှာကြည့်လိုက်။
အစ်မခင်မင်းဇော်… ဒီထက်နက်နဲသော မလေးရဲ့ပညာတွေထုတ်သုံးပြီးရင် အစ်မကို လာခေါ်လှည့်မယ်နော်.. :D
Comment by မလေး — July 30, 2009 @ 3:39 am |Edit This
ရောက်တာကို မပြောဘူး.. ဂျီမှာမတွေ့တာကိုပြောတာ။ စိမ်းကားတယ် မလေး.. နေ့တိုင်းလာအော်လိုက်မယ်။
Comment by ပန်ဒိုရာ — July 30, 2009 @ 4:46 am |Edit This
မလေး ညာတယ်……. လူတယောက်ဟာ ဂျီမရှိပဲ.. အဲ..ဂျီမေးလ် မရှိပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရပ်တည်နိုင်မလဲ။
Comment by ပန်ဒိုရာ — July 30, 2009 @ 5:56 am |Edit This
ကျနော် က တော့နား ကို မလည် ဘူးဗျာ
ရေးတဲ့သူက ပညာ တွေ နဲ့ ရေး တော့
တန်းတူ အရည်အချင်းရှိ တယ် သူတွေဘဲ ဖတ် တတ် ကြတာ
တော် ကြပါတယ် လို့ ပြောချင် ပါတယ်
Comment by Prince — July 30, 2009 @ 6:43 am |Edit This
ညပိုင်း မျက်လုံးဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အချိန်တော့ ကြည့်ပါတယ်
ဒီတစ်ခါမလေးလွဲသွားတယ်၊ ကျွန်တော် အဲဒီလိုဗရုက်သုက္ခတော့ ဖတ်တတ်တယ် မလေးရ
ဘာသာပြန်ပြလိုက်တော့ မငိုပါနဲ့ တဲ့ မှာလိုက်ပါတယ် :P
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — July 30, 2009 @ 9:10 am |Edit This
Ho lo lo….De lo lo in summer. Pyaw sa ya gyi naw. I like your poem. Thanks.
Comment by Lynda — July 30, 2009 @ 10:51 am |Edit This
ပန်ဒိုရာ .. မပန်ကလဲ ဂျီမရှိလို့ အဲ ဂျီမေးလ်မရှိလို့ ရပ်နေကြရတာဖြစ်မှာပေါ့.. သိဘူး :)
Prince… ပညာရှင်တွေလေ.. :D Princeကို မတွေ့တာ ကြာပြီနော်း)
ကျား… အော်…. ခက်ခဲနက်နဲသော မလေးရဲ့ ပညာရပ်ကို ဗရုတ်သုက္ခ…. တဲ့.. ဟွန်း
Comment by မလေး — July 30, 2009 @ 12:45 pm |Edit This
မူးတယ် မလေးရယ်. .. ကြံကြံဖန်ဖန်။ ကဗျာလေးက လှတယ်။
Comment by winkabar — July 30, 2009 @ 6:55 pm |Edit This
မလေး ရေးတတ်ပြန်ပြီ ။ မေလေးတောင် အဲလိုတွေငယ်ငယ်တုန်းက ရေးဖူးတယ်။ မြန်မာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ရောရေးတာလေ။ မလေးပျော်နေတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာတယ်နော် နောက်ထပ်လည်း မလေး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
Comment by maylay — July 30, 2009 @ 8:03 pm |Edit This
အစ်မ ကဗျာလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရေးထားတာ။
Comment by tawtharlay: — July 31, 2009 @ 1:00 pm |Edit This
Thanks green phyo…….
aww…forget ma gyi ( good )…;-)
Comment by phyo thet aung — August 3, 2009 @ 5:16 am |Edit This
Comment by ayechanthu — August 3, 2009 @ 5:46 am |Edit This
winkabar .. ညီမ အရမ်းပျောက်နေတယ်
maylay. tawtharlay. phyo thet aung… မလေး မကြီးမငယ်လျှောက်ရေးထားတာ လာအားပေးလို့ ကျေးဇူး :D
ayechanthu... သိုးလေး ဘယ်တွေရောက်နေတာလဲ.. ငြိမ်လှချည်လား။
Comment by Anonymous — August 3, 2009 @ 4:53 pm |Edit This
အဲအဲ… နားမလည်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လှပီပေါ့လေ… ဘယ်ရမလဲ သူများဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာတွေစောင့်ဖတ်တာပေါ့..
း) များကြီ… ဟိဟိ
Comment by စန္ဒကူး — August 5, 2009 @ 6:32 pm |Edit This
This isareal nice creatative one both way to write and beauty of poem.
I feel glad that there are nice period for you nowadays.
I wish you ,,,,,,,,,,,,,, to be own forever such as nice time like that Naw.
Comment by mgmoekhin — August 5, 2009 @ 9:25 pm |Edit This
ဘာသာပြန်ဖတ်မိတော့ မှပဲ အရမ်းကောင်းကြောင်းသိသွားပြီ
Comment by သိုး — September 11, 2009 @ 3:14 am |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:14 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:11 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:36 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ညနေရီတွေမှာ ကြယ်တွေကိုမော့ကြည့်လို့ အဖေ့ပုံပြင်တွေကို နားထောင်ဖူးခဲ့တယ်.. အဖေ။
အဖေ ပေးခဲ့တဲ့ သောင်္ကြာကြယ်ဟာ ပစိဖိတ်ရေပြင်ထက်မှာလဲ ထွန်းလင်းနေဆဲပဲ.. အဖေ။
အဖေပြောသလို သစ်ကိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ ငွေရောင်ဇီးကွက်တစ်ကောင်လို နေထိုင်တတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲပေမယ့်…
လွဲချော်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်နေတုန်းပဲ.. အဖေ။
လူတွေကို သနားညှာတာတတ်အောင်၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်အောင် အမြဲသင်ပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောမိရင် စော်ကားတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့အဖေ။
အဖေ.. သမီးရဲ့လက်ကို ဘီးသေးသေးလေးနဲ့ရိုက်လို့ အသည်းကွဲအောင် ငိုခဲ့ဖူးတာတွေ...။
လှပရှည်သွယ်တဲ့ အညိုရောင်လက်ချောင်းတွေရဲ့ပိုင်ရှင် အဖေ...။
အဖေ့လောက် နှုတ်စောင့်စည်းနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားမတွေ့ဖူးသေးဘူး...
အဖေ့လောက် ဘာသာတရားတိုင်းကို လေးစားတဲ့သူ မတွေ့ဖူးသေးဘူး...
အဖေ့လက်လောက်လှတဲ့လက် ဘယ်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဆီမှာမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူးလို့ .. ပြောရင်...
လူတွေ လှောင်ပြောင်လို့ရယ်ကြမယ်ထင်ရဲ့ အဖေ။
အမေ တပျစ်တောက်တောက်ဆူတိုင်း စောင်ကို ပါးစပ်အထက်ထိဆွဲအုပ်လို့ အိမ်ရာပေါ်မှာငြိမ်နေတတ်တဲ့ အဖေ။
အမေ့ကို ပန်းဝါလေးတစ်ပွင့်လို ကြည့်တတ်တဲ့အဖေ...
ပုလဲတွေလို စီတန်းလှပတဲ့ သွားတွေနဲ့ တောက်ပတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင် အဖေ...
နှုတ်စကားတစ်ခွန်းဟာ တစ်ခွန်းတန်ဘိုးရှိအောင် ပြောတတ်တဲ့ အဖေ...
သမီးလုပ်စာ တစ်ပြားမှ မစားသွားရတဲ့ အဖေ....
အဖေညောင်းလွန်းလို့ နင်းပေးပါဆိုရင် သုံးချက်လောက် နင်းပေးပြီးတာနဲ့ ထွက်ပြေးတတ်တဲ့ သမီးတွေကို ပြုံးကြည့်နေတတ်တဲ့အဖေ...
စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအမွေခံရလတံ့ ဆိုတဲ့ သမ္မာကျမ်းသစ္စာအရ၊ အမွေခံရာပြည်မှာ ပျော်နေပြီလား အဖေ။
လူတွေက အနူးညံ့အသိမ်မွေ့ဆုံး ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကိုပြပါဆိုရင် အဖေ့အုတ်ဂူကို လက်ညှိုးထိုးပြနေမိဦးမှာပါပဲ အဖေ…
လောကကြီးကို စိတ်ပျက်လို့ ခပ်စောစောများ ထွက်ခွာသွားသလား အဖေရယ်...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဆုံကြမယ်.. အဖေ။
ချစ်သောအဖေရဲ့ ဒီလူ့ဘ၀ မွေးနေ့မြတ်မှာ သတိရနေတယ် အဖေရယ်…
အဖေ့တွက် သမီးရဲ့ ဟိုတုန်းက မတောက်တခေါက် ကစ္စပနဒီပါအဖေ...
အစ်မ ရေ ပို့စ်အသစ်လေးကိုလာဖတ်သွားပါတယ်။ အစ်မလည်းလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Comment by tawtharlay: — July 13, 2009 @ 10:05 am
ဖတ်ရတာ ငြိမ်းချမ်းလွန်းလို့ မလေး ကိုယ်စား နှမြောမိတယ်။
ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာ သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လူကို စောစော ခေါ်တယ်လို့ပဲ ထင်မိပါတယ် မလေးရေ
Comment by ခွန်မြလှိုင် — July 13, 2009 @ 11:04 am
like father u r also N0.4 born person…that makes u2close :)
Comment by westcoast22 — July 13, 2009 @ 12:40 pm
ဖတ်ပြီး ခံစားရသလို … အဖေ့ကိုလဲ လွမ်းမိတယ်။
မမေငယ်ငယ်ကလဲ အဖေ ဘီးကလေးနဲ့ရိုက်တာကို စိတ်တွေနာပြီး ငိုခဲ့ရဖူးတယ်။
တသက်မှာ တခါ အဖေ့အရိုက်ခံရတာကို ခုထိ မမေ့ဘူး။
အဖေကို ချစ်တဲ့ သမီးချင်းမို့ … ခံစားချက်ချင်း ထပ်တူပါပဲ … ။
Comment by မေဓာဝီ — July 13, 2009 @ 2:57 pm
မလေးရဲ့စာကြောင်းတိုင်းမှာ ဖခင်ကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတမှုတွေ ပေါ်လွင်နေတယ်. နှမြောတသ ဖြစ်မှုတွေ ထင်ရှားနေတယ်.
ယူကျုံးမရ ပူဆွေးသောကဖြစ်နေပုံတွေ မြင်သာနေတယ်.
ုကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အဖေမွေးနေ့ကိုရော အဖေဆုံးသွားတဲ့နေ့ကိုရော အမြဲသတိရနေတတ်လို့ ကိုယ်ချင်းစာတယ် မလေးရေ…
ခဏတာ လာလည်ရှင်သန်ကြီးပြင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဒီလူ့ဘ၀လေးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထားခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်တွေ ကြီးမားနက်ရှိုင်းပုံကို ဘုရားသခင်က မျက်ကွယ်ပြုနိုင်အားမှာ
တစ်နေ့တော့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့် ရကြမှာပါ. ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ…
Comment by Yan — July 13, 2009 @ 5:35 pm
Comment by july — July 13, 2009 @ 7:38 pm
မလေးရေ…တို့တွေကတော့ သံသရာကို ယုံသူတွေမို့ မလေးနဲ့ မလေးဖေဖေ သံသရာတကွေ့မှာ ပြန်ဆုံကြဦးမှာပါ…
အဲ့ဒီအခါကျရင်လည်း ရှေးကထက် ပိုချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…
Comment by S-C — July 13, 2009 @ 7:55 pm
ကျွန်တော်ဘ၀ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အဖေကိုချစ်ခင်သော သားသမီးများကိုတွေ့ရင်
အဖေမျိုးပင်ဖြစ်လင့်ကစား ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဆို ပိုစိတ်ဝင်စားသေးတော့သည်။
ဘာလိုပဲဆိုဆို…… အဖေချစ်သူတွေကို တွေ့တိုင်း ကျွန်တော်ချီးကျူးမိပါတယ်။
Comment by NLA — July 14, 2009 @ 12:31 am
အစ်မရေ ဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲလာတယ်..။ အစ်မရဲ့ အဖေ အေးချမ်းစွာရှိနေမှာပါ..။ ကျွန်တော်လဲ အဖေမရှိတော့မှ သေသေချာချာမပြုစုလိုက်ရလေးခြင်းလို့.. ငယ်ငယ်က မသိတတ်ခဲ့တာတွေလည်းပါမယ်..။ မိဘအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေမိတယ်..။
Comment by Phyo Evergreen — July 14, 2009 @ 3:53 am
မလေးရေ ပို့စ်လာဖတ်တယ်နော်။ မလေးဖေဖေ ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ။ သံသရာမှာ မလေးတို့ ပြန်ဆုံနိုင်မှာပါ။ ဒီထက်ပိုနီး.ပိုချစ်နိုင်မှာပါ။ ပြောရင်း အဝေးက ဖေဖေ့ကို လွမ်းတယ်။
Comment by maylay — July 14, 2009 @ 8:23 pm
အိမ့်ရေ…မျက်ရည်ဝဲမိတယ်အိမ့်ရယ်… အမကလဲ အဖေချစ်သူမို့ … ဒါပေမယ့် အမဖေဖေက အိမ့်ဖေဖေလို ဘီးကလေးနဲ့ရိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး… ဒုတ်ကြီးကြီးနဲ့ လေ… (အမကလဲ ခေါင်းမာတာကို).. ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် အဖေချစ်ပဲလေ… အိမ့်ရေ… အပေါ်က အိမ့်ဖေဖေရဲ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းတာလေးတွေ ဖတ်ခဲ့ရပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေ့ လိုက်တော့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းတာလေးက မျက်နှာမှာ ပေါ်လွင်အေးချမ်းနေတာ သတိထားမိတယ်… အိမ့်က အဖေနဲ့ တူတယ်နော်… … ငြိမ်းချမ်းလွန်းတဲ့ အိမ့်ဖေဖေ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘုံဘ၀မှာ အမြဲငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ…
Comment by တန်ခူး — July 14, 2009 @ 10:19 pm
They all preceded us to our final resting place where “the wondrful presence of God”. With that knowledge alone….along with His unmeasurable grace…keeping us, comforting us and sustaining us til we meet them again.
Comment by Lynda — July 15, 2009 @ 9:39 am
ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့ . . . . . ထိုင်တွေးနေရင်း
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလားလို့ တွေးနေမိရင်း……………..
မလေး လိုပဲ နှမြောတသ၀မ်းနည်းမိပါတယ်
အေးချမ်းလှပတဲ့ဘ၀မှာ တည်ကြည်စွာပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — July 15, 2009 @ 1:30 pm
Comment by ဒေါင်းမင်း — July 16, 2009 @ 1:08 am
Comment by အေးချမ်းသူ — July 17, 2009 @ 5:45 am
မလေးရဲ့အဖေ ကောင်းကင်ဘုံကနေ မလေးအတွက်ကျေနပ်နေမှာပါ
Comment by rose of sharon — July 18, 2009 @ 10:00 pm
လောက မှာ ဖြစ်တက်တဲ. သဘောတွေဘဲလေ
လောကက မှာ မိဘ နှစ်ပါလုံး ဟာ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ
ကိုယ်လိုချင်သော ဘ၀ ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ……….
Comment by hla.myat.soe — July 19, 2009 @ 8:07 am
Comment by Angel Eyes — July 20, 2009 @ 9:35 am
me too deep feeling.
Because my father also this months passes away (already 03years).
Comment by mg phyo thet aung — July 22, 2009 @ 6:05 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:31 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာ, အဖေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:27 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ